စွမ်းရည်:500~ 600kg / h
နောက်ဆုံးတောင့်အရွယ်အစား:2~ ၈ မီလီမီတာ
ဒီဇယ်လုံးလေးပြုလုပ်သည့်စက်သည်သေသပ်သောဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုသည်,အစာတောင့်များထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာလိုသူများသို့မဟုတ်၎င်းတို့အားလုံးလေးများထုတ်လုပ်သည့်နေရာ၌လျှပ်စစ်မီးအလွယ်တကူမရရှိလိုသူများအတွက်၎င်းသည်အတောင့်တင်းစေသောစက်ဖြစ်သည်။, ဥပမာ, သူတို့ရဲ့လယ်ယာ၌တည်၏. ဒီဒီဇယ်လုံးလေးဟာအိမ်လုပ်လုံးလေးများအတွက်အရောင်းရဆုံးဖြစ်သည်. ၎င်း၏အရွယ်အစားသေးငယ်ပြီးဒီဇယ်အင်ဂျင်သည်ရွေ့လျား။ လှည့်ပတ်သွားလာရန်အဆင်ပြေစေသည်. စက်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများမှာပြားချပ်ချပ်တစ်ပြားနှင့်အလုံးလေးတစ်လုံးဖြစ်သည်. pelletizing နေစဉ်, ကောင်းစွာပြင်ဆင်ထားသည့်ကုန်ကြမ်းများသည်အတောင့်အတောင့်နှင့် roller ကြားရှိtoရိယာသို့ကျသွားသည်. ထို့နောက်သေတ္တာနှင့်ကြိတ်စက်အကြားရှိဖိအားသည်ပစ္စည်းများကိုသေတွင်းရှိအပေါက်များမှတဆင့်ဖိလိမ့်မည်. ထိုအခါ, ပြားချပ်ချပ်သေ၏အခြားဘက်ခြမ်းတွင်, သိပ်သည်းမှုအစာကျွေးသောတောင့်တင်းများကိုထုတ်ယူ။ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအရှည်ထဲသို့ဖြတ်ထုတ်ပြီးအလုံးလေးစက်၏စက်မှကျလိမ့်မည်.
ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့ ,ဒီဒီဇယ်လုံးလေးသည်ကုန်ကြမ်းအမျိုးမျိုးမှအစာတောင့်ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်: ကောက်ရိုးစပါး, ကျက်စားရာ, ပြောင်းဖူးကောက်ရိုး, ဆန်ဖွဲ, ပဲခွံ, မြေပဲခွံ,စိုက်ပျိုးရေးအကြွင်းအကျန်များနှင့်သစ်တောစွန့်ပစ်စသည်တို့.
ဒုတိယအချက်, တူညီတဲ့ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုထိန်းထားရင်းနဲ့လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်ခြင်းရဲ့ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းနိုင်တယ်. ဒေသအားလုံးတွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမရရှိနိုင်ပါ, အထူးသဖြင့်လယ်ကွင်းသို့မဟုတ်ကျေးလက်ခြံများတွင်. ဒါပေမယ့်ဒီအဆင်မပြေမှုကကျွန်တော်တို့အတွက်အစာတောင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုတားဆီးလို့မရပါဘူး။ ဒီအတောင့်ထုတ်လုပ်တဲ့စက်ကိုဒီဇယ်အင်ဂျင်နဲ့မောင်းနှင်တာဖြစ်ပြီးလျှပ်စစ်မီးပြတ်လပ်တဲ့နေရာမှာရွေးချယ်စရာကောင်းပါတယ်။, စျေးကြီး, အသုံးပြုရန်မတတ်နိုင်သောသို့မဟုတ်အဆင်မပြေ.
တတိယ,ဒီစက်သည်အမျိုးမျိုးသောအချင်းများနှင့်အစာကျွေးသောတောင့်ကိုဖိပေးနိုင်သည် (များသောအားဖြင့် 2mm မှ 8mm မှ) မတူညီသောမော်ဒယ်များနှင့်အမျိုးမျိုးသောဖိအားအချိုးအစားများမှတဆင့်အရှည်များ။ သေဆုံးပြီးလှည့်သောဒီဇယ်အတောင့်စက်များသည်အရည်အသွေးမြင့်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်သည်။, နှင့်သူတို့၏ဝန်ဆောင်မှုဘဝကအနည်းဆုံးကျော်ဖြစ်ပါတယ် 800 နာရီ.
စတုတ်ထ,သည်အခြားပြားချပ်ချပ်သေလုံးလေးများလိုပဲ, ဒီတောင့်ကြိတ်စက်သည်အရွယ်အစားသေးငယ်ခြင်း၏အားသာချက်များကိုရရှိသည်,ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်း,ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းပုံ, အနိမ့်ပါဝါစားသုံးမှု, လွယ်ကူသောစစ်ဆင်ရေး, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအနည်းငယ်သာ, ဆူညံသံ, သက်တမ်းကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒီဇယ်လုံးလေးပြုလုပ်သည့်စက်သည်အရွယ်အစားသေးငယ်သည်, ဒါ့အပြင်သင်လိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာထားနိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းဒီဇယ်ဆီကိုအသုံးပြုကတည်းက.
1.VICTOR အမှတ်တံဆိပ်အစာတောင့်စက်, အစာတောင့်လုပ်ဖို့ဖိအားအောက်မှာစက်ယန္တရားသူ့ဟာသူအတွက်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကို, ဒါကြောင့်အစာကျွေးဝက်များအတွက်သင့်လျော်ပါတယ်, တိရစ္ဆာန်များ, သိုး, ကြွက်ကို gnawing, အစာကျွေးနိုင်မှုတိုးတက်လာသည်, တိရိစ္ဆာန်များ၏စားသုံးမှုတိုးမြှင့်.
2.နို့တိုက်ကျွေးရေးကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ဒီဇယ်အတောင့်ကြိတ်ခွဲစက်, မြင့်မားသောအသုံးချ, အစာကျွေးခြင်းပမာဏကိုထိန်းချုပ်ရန်လွယ်ကူသည်, အစာကျွေးခြင်း, သန့်ရှင်းနှင့်သန့်ရှင်းရေး.
3.အမှုန်ဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်စဉ်ကိုဒီဇယ်အစာတောင့်ပြုလုပ်သောစက်သည်စပါးကိုရစေသည်, ပဲပင် trypsin သပိတ်မှောက်အချက်ယိုယွင်း, အစာခြေအပေါ်ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချပေးပါတယ်, ကပ်ပါးဥနှင့်အခြားရောဂါဖြစ်ပွားစေသောဇီဝသက်ရှိများကိုသတ်ပစ်နိုင်သည်, ကပ်ပါးရောဂါများနှင့်အစာခြေလမ်းကြောင်းစနစ်ရောဂါများကိုအမျိုးမျိုးလျှော့ချ.
ဒီဇယ်လုံးတောင့်စက်၏နည်းပညာဆိုင်ရာ parameters များကို
(ကီလိုဂရမ် / နာရီ) မြန်နှုန်း
(r / min) အရွယ်အစား
3 50~ ၈၀ 320 0.66*0.32*0.68 80
သင့်ဘာသာစကားရွေးပါ EnglishAfrikaansالعربيةမြန်မာစာFrançaisDeutschहिन्दी; हिंदीItaliano日本語한국어PortuguêsРусскийEspañolKiswahiliภาษาไทยTürkçeTiếng ViệtisiXhosaisiZulu